free: ezintathu imidlalo ukufunda malunga nonviolent zonxibelelwano kwi-usapho - IVIDIYO INCOKO Rock-intanethi Dating
free: ezintathu imidlalo ukufunda malunga nonviolent zonxibelelwano kwi-usapho
Kengoko rhoqo baqonde ukuba singaba cruel amazwi okanye ukuba singaba cruel ukuba nathiKwi-inkqubo nonviolent unxibelelwano (CNV), zonke iintlobo zobomi kufuneka respected.
Yenza ngokwakho nezinye na ngaphandle uloyiko isohlwayo, inzala kwi umvuzo okanye guilt, kodwa kunye injongo ukuqonda kwaye kuhlangana iimfuno zabo bonke.
Sinako zama ukuba abe njengoko ngako oko njengoko kunokwenzeka oku unxibelelwano ngexesha ungquzulwano: Eli into endifuna ukunxulumana kunye ngokwam, kwaye nabanye abantu esabelana ndise impixano, ngoko ke sinako ukwenza ubomi obungcono. Umzekelo, xa crossed i-street ngaphandle ujonge, ndathola scared kwaye kwafuneka zikhathalele ngokwam. Ndiya kubuza kuni ukumisa lonke ixesha xa emnqamlezweni a pedestrian crossing kwaye jonga apha kwaye kwangoko ukuya ekhohlo phambi crossing. Mastering inkqubo nonviolent unxibelelwano ufuna ukusebenza kwi amanqaku ka-zimvo kwaye ifuna, ngokunjalo nako aqonde umyalezo lowo uqulathe umyalezo ukuba sibonisa imfuneko. Ushicilelo uluhlu uvakalelo kunye trim ngalendlela umthi igqabi (enye evakalayo corresponds omnye ikhasi) Ezi zimbini imithi amele umntu: lokuqala xa ifuna kuyahlangatyezwana nazo, kwaye wesibini xa ifuna ukuba abakho kuhlangatyezwana nazo. Ubhale"Xa wam iimfuno kuyahlangatyezwana nazo"kwi-kufakwa lokuqala umthi"Xa wam iimfuno ayikho zahlangana"kwi-kufakwa yesibini umthi. Zichaza ukuba zonke uvakalelo zisetyenziswa ukuze alumkise malunga neemfuno: glplanet zimvo phambi iimfuno kuyahlangatyezwana nazo, kwaye unpleasant zimvo phambi iimfuno asingawo zahlangana (uyakwazi buza abantwana imibuzo:"uziva Njani xa yakho kufuneka kuba ukutya ngu kuhlangatyezwana nazo? Kwaye xa yakho yindlala kufuneka ngu izifuno.") Thatha enye ikhasi ngexesha: Ukufunda ndinovelwano ebhalwe kuyo, xoxa lo kukuvakalelwa, facial yenza ingxenye yesakhelo, kwaye basondelelane ukuba kwiimeko apho oku ndinovelwano waba experienced. Xa umsebenzi kwi amanqaku igqityiwe, senza isigqibo sokuba kunye xa oku ndinovelwano ukelele: xa kufuneka ngu kuhlangatyezwana nazo okanye xa akuvumelekanga ukuba kuhlangatyezwana nazo. Yintoni imizekelo zithe ebone okanye idlalwe kwimbali kwixesha elidlulileyo. kuxhomekeke impendulo, kufuneka glue amagqabi ukuba isebe lokuqala umthi, ukuba isebe wesibini. Vumela abantwana decorate emagqabini, umbala kwabo, personalize kwabo (umzekelo, omnye umbala kusenokuba attributed ukuba glplanet emotions, kwaye enye-ukuba unpleasant, kwaye kwangoko degrade ezi imibala kuxhomekeke ubunzulu emotions).
Oku abancinane mdlalo malunga identifying ezinye iimfuno zethu, ukuhlolwa ntoni kangakanani abo kuyahlangatyezwana nazo, kwaye ebona indlela sinako kuhlangana unmet iimfuno.
Mna recommend ukuba uyakwazi ukulayisha ezansti maps ka-ifuna ukuba ube arisen njengoko ngenxa nonviolent unxibelelwano (ezinye ezisisiseko unitary iimfuno zabo bonke kuthi): CNV ukudlala amakhadi unako ukudlala lo mdlalo yedwa okanye nabanye abantu kwaye zoba njengoko abaninzi amakhadi kangangoko ufuna. Abantwana (ezintandathu iminyaka yobudala engama) kwaye abadala unako dlala: Abantwana babe kufuneka iinkcazelo kwaye imizekelo ukuze ubone ukuba ukubaluleka ezinye ezi mfuno. Sidinga ukuchonga zethu unmet iimfuno ukuze, ukuba zithungelana nabanye abantu, hayi NGOKUCHASENE: Izigwebo, criticisms, diagnoses, kwaye iinkcazelo malunga abanye ngabo bonke yenza ingxenye yesakhelo ukuba distract ukusuka iimfuno zethu. Marshall Rosenberg Unxibelelwano kunye nonviolent abantu, Marshall Rosenberg ifuna ukuba siza kufumana i-unfulfilled kufuneka emva wonke umgwebo senza, ngenxa yokuba iimfuno ziindleko ubomi befuna mna-intetho. Ukususela mzuzu abantu bathethe malunga kwezabo iimfuno, kunokuba i-unfairness abanye abantu, kuya uba kakhulu lula ukufumana iindlela ukuhlangabezana neemfuno bonke."Marshal Rosenberg, sinako ifomu a umdlalo we guessing imfuneko kuba lemveli ka-umyalezo.
Oku akunakho guess iimfuno abanye ngu kwalomgaqo-siseko ukuba ungquzulwano isisombululo: wonke umyalezo, nokuba yayo umxholo okanye ifomu, ufumana i-intetho ka-imfuneko.
Marshall Rosenberg lo mdlalo iphenjelelwe yi-incwadi Mhlekazi abazali abantwana yi-Sura HART kwaye Adelaide kindle Hodson. Ngamnye nxaxheba sele ezindlebeni a Omnyama kwaye girl (kwi-shicilela kuthenga i-cheap phindela okanye ubeke izandla zakho kuba girl kwi ibhola yomthi alley kwaye narrow fists kuba Omnyama). I-moderator (preferably i-omdala ngubani abantu abaqhelekileyo nge-NVC) amagama kwaye uchaza zine iindlela mamela imiyalezo ngokungqinelana nomgaqo-siseko unobtrusive unxibelelwano (NVC): I-moderator inika imizekelo ulwimi jackals kwaye giraffes, kwaye abathathi-nxaxheba kufuneka bayigcine iindlebe zabo vula. Omnye umzekelo: ekupheleni kwale utyelelo, umququzeleli unika omnye umntu ke iindlebe omnye Omnyama, kwaye omnye Omnyama ke iindlebe komnye umntu Omnyama. Abanye abathathi-nxaxheba, ngokulandelelanayo, zithethwe a kunzima umyalezo (isihlalo, criticism, accusation, kwi-ulwimi Omnyama). Umntu lowo wakhe Omnyama iindlebe uphendula kuqala nge iindlebe zabo ngamnye omnye, kwaye kwangoko kunye iindlebe zabo ngamnye enye. Kwaye ke umntu owenza wakhe the girl ke iindlebe uphendula kunye iindlebe iyonela kububanzi bephepha omnye umntu, kwaye kwangoko indlebe iyonela kububanzi bephepha omnye umntu.
Uyakwazi qinisekisa ezinye iinketho: Onke amalungu Ebandla wear girl iindlebe kwaye kufuneka siphendule le girl ke aggressive umyalezo kwi-girl ulwimi.
Ingaba ucinga ukuba omnye a dialogue apho ngamnye somlomo sele ezahlukeneyo ezindlebeni (enye abo akuthethi ukuba athethe Omnyama ulwimi, kwaye enye kuphela uthetha girl ulwimi), okanye uyakwazi ukuza kutsho nge dialogue apho ngamnye somlomo sele efanayo ezindlebeni (okanye jackals, okanye giraffes), kwaye ke xoxa neeyantlukwano kwaye iziphumo wabhala kuxhomekeke uhlobo ulwimi olusetyenziswa.
Ezi ezintathu abancinane imidlalo kuba abantwana (ezintandathu ukuya ezisixhenxe ubudala) ingaba omkhulu kuba NVC uqeqesho. Banako kusetyenziswa kwi-classroom kwaye ekhaya ukukhuthaza abantwana kwaye ulutsha ukuba azibandakanye kwi-nonviolent unxibelelwano, usapho, okanye nkqu ishishini. Ukuya nkqu ngaphezulu, Umzali-eyobuhlobo, umntwana-eyobuhlobo (Iintlelo La Decouverte) inikezela ngezixhobo ezahlukeneyo ezinye izandla-ngomhla we-imidlalo kunye abantwana nyusa yokwazisa ka-nonviolent unxibelelwano. Olukhulu site, iluncedo kakhulu kuba umsebenzi wam njengoko Umlawuli we-umzali Kwicandelo. Kufuneka uqhagamshelane isifrentshi Association kuba nonviolent unxibelelwano. Kungenjalo, encwadini mna ekhankanywe inqaku, kukho models ukuba kufuneka kusikelelwa. Ungakhetha kwakhona-gcina le iphawula ezi stages kwaye dedicate kweklasi isithuba okanye endlwini ukuba igumbi ukucacisa yintoni eyenzekayo kwi-KWETHU. Zombini abadala kunye nabantwana unako shiya xa ngabo overwhelmed yi-olomeleleyo emotions kwaye kufuneka lekhefu ukuze kugxila zimvo zabo kwaye ifuna. Free: ezintathu imidlalo ukufunda malunga unxibelelwano, nonviolence kwi-usapho.
Egreenland Dating Zephondo
i-intanethi free ividiyo intshayelelo esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi ividiyo Dating nge kubekho inkqubela kuba free omdala Dating ngaphandle ubhaliso ividiyo free ividiyo incoko Dating ngaphandle ubhaliso Chatroulette ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko girls kuba Dating ividiyo iifoto ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso kunye girls esisicwangciso-mibuzo roulette ngaphandle ads